Fihaonana an-tampon’ireo filoha teo aloha (sy ny ankehitriny) – Malag@sy Miray
Voalaza ombieny ombieny fa i Madagasikara dia nosy manan-karena kanefa dia mahantra vahoaka. Tsy vahiny amin’ny antony mahatonga izany ireo mpitondra nifandimby nisy teto, indrindra fa nanoboka tao anaty fanjanahan-tany. Satria mazava fa tsy soa ho an’ny firenena malagasy no nahatonga ireo vahiny nifandimby nanjanaka fa soa indrindra ho an’ny firenena izay naniraka azy.
Tsy any intsony ny resaka ankehitriny. Tsy fotoana intsony izao hifanondrotondro sy hifampiapanga. Raha mba misy tsirim-pitiavan-tanindrazana na dia kely fotsiny aza ireo mpanao politika sy ireo mpitondra nifanesy mbola velona sy ny zanaka amna-jafiny, izay raha ny tokony ho izy dia tsy misy idirany amin’ny raharaham-pirenena noho ny efa nijanonan’ny vanim-potoana faha-mpanjaka, dia miara-mifanaiky ny hihaona sy hikaon-doha.
Amin’izay fotoana izay dia mila atomboka amin’ny fifamelan-keloka ny zava-drehetra. Avelao izay alahelo sy izay rehetra mbola mibahana ao am-po noho ny fingampingana maro samihafa, ny fifanarahana tsy tanteraka, ny tombon-tsoa very. Fa jereo ny ho avin’ny firenena malagasy sy ireo vahoaka roapolo tapitrisa mahery. Tsy afaka hiara-hiasa madio raha tsy tena mifamela heloka sy manadino ny ratsy nifanaovana.
Tsy hiteny izahay hoe iza no manandra-tena ary iza no efa mba manetry tena fa raha tsy am-panetre-tena no hiresahana sy hihavanana dia tsy maintsy hisy lonilony na ambom-po voadona foana ka tsy mampandroso. Efa fantatry ny olona rehetra ianareo fa filoha efa nitondra, olona ambony, tsongoim-bolo, ka tsy mila ampahafantarina sy averimberina hatrany na amin’ny fiteny na amin’ny fihetsika izany. Ny vahaolana mampandroso sy ny vokatra azo tsapain-tànana no ilain’ny rehetra. Ary raha mamingana izay miasa ny sasany aminareo dia ho tsarain’ny tantara hatramin’ny zanaka aman-jafinareo ka aza gaga. Raha ny tantara ara-pinoana no tsiahivina dia fomba iray nahafahana naneho izany fanatre-tena izany ny fanasana ny tongotry ny hafa. Satria Madagasikara dia firenena anisan’ny betsaka kristianina, mety hisy fiantraikany eo imason’ny vahoaka izany fihetsika feno fahatsoara izany. Fa dia izay manetry tena tokoa no ho asandratra.
Fanambarana ny hery :
Tsy kilalao-teny sanatria fa izay mihitsy ilay tena hevitra. Samy manana ny nampiavaka azy sy manavanana azy ny tsirairay, izay tsy mahay sobiky, hono, mahay fatam-bary. Rehefa ianareo lehibe anie no mihavana dia ny madinika koa mba tokony hanaraka izany ka hifanaraka.
Betsaka ny azo lazaina eto fa tari-dàlana ihany aloha no atao. Matoky izahay fa avy amin’ireo tari-dàlana ireo dia ho hain’ny mpanolo-tsaina sy ireo mpitondra mahay be sy avara-pianarana ireo ny fanohizana azy.
Samy manana ny olony ireo mpitondra fahiny ireo, samy manana izay « Joker-ny », samy manana ny « génie »-ny. Inona no misakana ny malagasy, toy ny amin’ireny lalao iraisam-pirenena andefasana ny ekipa nasionaly ireny, raha toa ka manangana « dream team », ilay ekipa raitra sy tsara indrindra ahitàna ireo tena sangany sy havanana indrindra amin’ny sehatra hiasany? Efa nisy ihany ny resaka « quota » fa tsy dia any loatra. Fa raha manahirana dia ataovy fifaninana toy ireny « concours national » ireny ka izay tena farany mahay sy mety amin’ny toerana isan’isany no apetraka hiasa fa tsy sanatria ny namana sy ny havana toy ny ataon’ny sasany. Amin’izay kosa anefa dia mila fiainianana ny hankatoa izay mitondra sy mitantana azy izay omena andraikitra.
Fa ny teny hamaranana azy dia tsotra. Efa nandramanareo daholo izay fomba rehetra nitantanana : fahalalàna avy amin’ny Rose-Croix, Fahasahiana avy tany amin’ny loge sy ny obedience samihafa tany, ny fianarana natao amam-polotaonany avy, ny trai-kefa ara-pitantana isan-karazany ary ny sampy sy ny fanamasinana doany. Saingy fanta-tsika aiza no nahatongavan’ny firenena hatreto. Ndao indray mba andramana izay mbola tsy natao nefa efa nahitan’ny firenena hafa tombiny. Tsy inona izany fa ny fanankinana ny fiainanam-pirenena sy ny vahoakny amin’Andriamanitra Rain’i Jesoa Kristy. Mba andramo ihany e!